Iminyaka embalwa emva kweNgxelo yeBleacher yathumela i-slideshow kwindawo yabo ye-100 Ininzi Iimidlalo ezithandekayo zexesha lonke.
Uluhlu lwolu hlobo luphantse luze lube lugunyaziso kwaye le nto ayikho. Nangona kukuhle ukupheqa amagama (phantse onke asemagqatshini athile), ndinenkathazo enkulu ngokufakwa kwamabhokisi amathathu kuphela!
Ngethuba abo bathathu-u- Muhammad Ali , uMike Tyson kunye noManny Pacquaio - ngokuqinisekileyo bangabaloluhlu, baninzi abanye abangakhange bajongwe .
Ngoko siye phambili kwaye siququzelele uluhlu lwethu lwee- 50 zoninzi kwiibhokisi ze-50 ezidlulileyo . Lona alukho uluhlu lwama-pound-for-pounds , ngendlela, beyathetha iipound kwintlalo yesondlo, ixabiso lokuzonwabisa kunye nesibheno sesibheno kwisithuba sokugqibela senkulungwane okanye kunjalo.
Ezi zinto azikhozona iibhokisi ezinamandla kakhulu okanye ezifezekileyo, kodwa isihlwele esikhulu siyakukholisa. Abaphengululi abenza zonke iimfazwe kufuneka babone ukulwa.
1. UMike Tyson
2. UManny Pacquiao
4. URoberto Duran
6. UTommy Hearns
7. UMatewu Saad Muhammad
9. U-Erik Morales
12. UJulio Cesar Chavez Jr.
13. Ushukela uRayon Leonard
14. UJulian Jackson
15. UMarvin Hagler
18. UMicky Ward
19. iGeorge Foreman
20. UMichael Carbajal
21. UTommy Morrison
24. UCarlos Zarate
25. UDanny Lopez
26. I- Israel Vazquez
29. UCarlos Monzon
31. URuben Olivares
32. UVinny Pazienza
34. USalvador Sanchez
35. URay Mancini
36. iPipino Cuevas
37. URafael Marquez
38. uAlexis Arguello
39. UMarco Antonio Barrera
40. I-Iran Barkley
41. UJeff Fenech
42. URicky Hatton
44. URicardo Lopez
45. URafael Ruelas
46. ​​Earnie Shavers
48. UGreg Haugen
49. uFelix Trinidad
Ulahlekelwa phezulu 50 (ngombono wam): UShane Mosley, uAlexander Margarito, uRicardo Mayorga, uFernando Vargas, uMiguel Cotto, uDavid Tua , uDwight Qawi, uJeff Chandler, uJohn Duddy.
QAPHELA: Ukuba eli liluhlu lweebhokisi ezimnandi zexesha lonke , ngokuqinisekileyo siza kufumana indawo yokuthandwa nguJack Dempsey, iSuar Ray Robinson, i-Rocky Marciano, uStanley Ketchel, uWillie Pep, uJoe Louis, i-Rocky Graziano noJake LaMotta.
Ubani ocinga ukuba yiyona ibhokisi ebhokisayo kakhulu ukususela ngo-1960? Yaye ngubani okhoyo eluhlu lwethu? Sitshele ngubani olahlekileyo kwi-Top 50 yethu kwi-About.com yephepha le-Facebook kunye ne-Twitter, kwaye ongekho kulo uluhlu kuwo wonke umbono wakho.
Siyazi ukuba ezi zintlu zisoloko zizithoba kwaye zivulelekile ukutolika, zive ukhululekile ukuxelela ibali kumajelo asekuhlaleni kunye nabahlobo bakho ukuze uthole ingxelo yakho.
Ukuqhaqhazela kwaqala njani?
UGénéalogy GEDCOM 101
Inzala - Uqoqosho lweMdla
Iinyaniso ngeMigangatho yeeMpahla zoMbane
I-10 ye-Racist Supreme Court Rulings
Liyiphi iLwimi eliPhambili?
Ukuzinikela kwe-Easter: Iyintoni Injongo Yam?
Iyintoni Ingcaciso yePasse eBallet?